Kiplagat: Soomaaliyeey magtii (4.5) miiskeey idiin saarantahay!
Maalin ayaa nin tuug ahi kusoo baxay nin sheekha oo ka yimid beertiis, ninii tuugga ahaa wuxuu rabay inuu dharka kala baxo siikha waxaana dhexmaray sheekadaan:
Tuuggii: Dharka ii bixi.
Sheekhii: Maxaa keenaya inaan dharkayga kuu bixiyo?
Tuuggii: Anigaa kaaga xaq leh dharkaaga!
Sheekhee: Xaggeed warkaas ka keentay?
Tuuggii: Walaalkaa faro-maran baan ahay, adna hanti baad haysataa.
Sheekhii wuxuu yiri: belaayooy ka dhac.
Tuuggii: waxaan rabaa inaan u labisto sidaad u labisatay.
Sheekhii: ma i qaawinaysaa si cawradaydu u muuqato?
Tuuggii: Dhib ma leh, waxaan Maalik nalooka wershay inuu yiri dhib ma leh in ninku qubaysto isagoo qaawan.
Sheekhii: dadkaa igu soo baxaya oo cawradayda arkaya?
Tuuggii: haddii dad halkan kugu arkayo kuuma soo ban-baxeen.
Sheekhii: waxaan kuu arkaa nin caqli badan ee ii ogoloow inaan beertayda ku noqdo oo aan dharka kuu soo bixiyo oo kuu keeno.
Tuuggii: maya waxaad rabtaa inaad igu soo dalbatid afar addoon oo ay suldaanka ii qaadaan kaddibna xabsi la i dhigo, karbaashna la igala daalo anoo silsilad lugaha la iga jabshay.
Sheekhii: Maya waan kuu dhaaranayaa inaan balanta ka soo baxayo oo aan ku xumayn doonin.
Tuuggii: Waxaa Imaam Maalik nalooka wershay in aysan wax ka- soo-qaad lahayn dhaarta tuugada loogu dhaarto.
Sheekhii: waxaan kuugu dhaaranayaa inaanan xeeladaysi wadan.
Tuuggii: waa uun dhaar dhaar kale lagu daray oo tuug ku jeedda.
Sheekhii: naga daa doodda ee Ilaah baan ku dhaartee waan kuu keenin dharkaan anoon cuqdad kuu qabin.
Tuuggii oo madaxa hoos u rogtay wuxuu shiikhii ku yiri ma garanaysaa waxaan ka fekerayo?
Tuuggii: waxaan maskaxda ku soo kulmiyey waxyaalihii ay tuugadu sameeyeen laga soo bilaabo waqtigii Nabiga (SCW) ilaa maanta mana maqal tuug qaatay “nasii’o” (dayn ama dib-u-dhigasho) waxaanan nacayaa in aan Islaamka ku bilaabo bidco dambigeedu dushayda noqdo iyo waliba dambiyada dadka (tuugada) kale ee igu dayda ilaa Qiyaamaha ee ii bixi dharka.
Sheekhii: waan u bixiyey dharkii isna intuu qaatay buu iska tagay.
Soomaalaay ma maqasheen qof raba intuu wax dilo oo u tagay dadkii uu rabay inuu wax ka dilo inuu ku yiraahdo hebel baan dilayaaye magtiisa sheekta oo kaalaya aan ka tashannee intaanan dilin?
Dadkii Sweden kula kulmay Kiplagat waxay sheegeen inuu ku yiri iska ilooba Soomaliweyn. Annaga iyo Itoobiya ayaa shirka wadna waana nasiib aan helnay. Wuxuu ka wadaa waxaa naga go’an inaysan Soomaaliya dib dambe usoo kaban marka magtiina qaata oo qabiil kasta qaybtiisa ha qaato (4.5). Fiicnaan lahaydaa hadduu gobolaysi noo siiyo magta oo aan helno 8 ama 16 ama 18.
Kiplagat wuxuu wax noogu qaybiyey sidii nin reer baadiye ahi wax u qaybshay mar uu kusoo hoyday reer. Reerkaas ayaa waxay sosheen/soleen hal digaag. Reerku wuxuu ka koobnaa oday iyo habrtiis, labo wiil iyo labo gabdhood oo ay dhaleen. Markii digaagi diyaar noqday ayey ku dhaheen ninkii reer baadiyaha ahaa noo qaybi. Reer baadiyihii wuxuu yiri madaxa waxaa iska leh madaxa reerka (odayga) waa tunka digaaga oo hilib ma saarna. Dabadana islaanta. Iyadana wax kuma yaalaan sida tunka. Labada garab ee aan hilibka lahayna labada gabdhood. Labada lugoodna labada wiil. Inta soo hartayna waxaa leh ninka martida ah wuxuuna qaatay digaagii badankiisii.
Maalintii dambe ayaa odaygii wuxuu solay/shiilay shan digaag markaasu ku yiri reer baadiyihii noo qaybi. Reer baadiyihii wuxuu yiri waxaan filayaa inaydaan ku farxin qaybtaydii shalay? Odaygii wuxuu yiri dhib ma leh ee noo qaybi. Reer baadiyihii wuxuu yiri ma tiro is-le’eg baan wax ku qaybshaa (dhaban) mise mid is-dheer (kissi)? Waxay dhaheen mid is-dheer. Reer baadiyihii wuxuu yiri: odayga iyo habarta iyo hal digaag ah waa isku seddex. Labada gabdhood iyo hal digaag ahna waa isku seddex. Labad wiil iyo hal digaag ahna waa isku seddex. Aniga iyo labo digaag ahna waa isku seddex. Reerkii waxay dhaheen tiro is-le’eg noogu qaybi. Reer baadiyihii wuxuu yiri waxba kama qabo. Wuxuu yiri habarta iyo labada gabdhood iyo hal digaag ahi waa isku afar. Odayga iyo labada wiil iyo hal digaag ahina waa isku afar. Aniga iyo seddex digaag ahina waa isku afar. Reer baadiyihii inta xagga ula jeestay buu seddexdiisii digaag cunid ku bilaabay isagoo Ilaah ugu mahadinaya qaybta uu baray.
Marka waxaa ka baqayaa in loo darsado qaybtii Ina Cumar Geele ee aan wax laga dheefin. Waxaan shakki lahayn inuusan Ismaaciil Cumar Geele ka rabin Soomaali inuu dhul ka qaato ama dhib kale oo ay ku hayso kaliya waxaa dhici karta in xiriir uu ka dhaxeeyey isaga iyo C/Qaasim. Sidaan horay usheegay is-bahaysiyadu waxay ahaayeen labo labo ama saas oo kale waqtigii Carta laakiin hadda way sii balaarteen.
Ninkastoow xassuuso Xaddiiskii Nabiga (SCW) uu kulahaa ninkii walaalkiis caloosha laga hayey sii malab. Oo ninkii haddana Nabiga (SCW) oo yiri Nabi Alloow (SCW) walaalkay malabkii xanuun buu ka sii qaaday. Nabigu (SCW) wuxuu yiri sii malab waxaa been sheegaysa caloosha walaalkaa. Ilaa markii dambe uu ninkii buskooday. Ma garanayo in qab-qablayaasha iyo hogaamiye dhaqameedyadu ogyihiin waxaynaan ogayn oo ay fahmayaan in qabyaaladu sida malabkaas marka dambe keeni doonto qaran iyo nabad.
Marka waxaan qab-qablayaasha iyo hogaamiye dhaqameedyada ku leeyahay sheekada qaran-dhisku yey noqon sidii haweenaydii inta ninkeedii iyo rag la socda oo safar ka yimid gurigeedii yimaadeen oo aan u diyaarin wixii dumarku raggooda u diyaarin jiray(sida oodkaca iyo wax kaloo diyaarsan) damacday inay khiyaano isku maameeliso iyadoo inta biyo ku shubtay haan/aagaan u saartay lulid. Ninkii wuu fahmay hadday meesha caano ku jiraan in haweenta ragga siin lahayd xittaa haddii aysan subag badan dhalin maxaa yeelay caanahaa markaas dhib loo qabaa. Ninkii wuxuu yiri “WALLEE biyoow subag dhashe ama lulliin dambe la idiin ma celiyo”. Marka waxaan leeyahay WALLEE qabyaaladii qaran iyo is-jecayl keentay ama Soomaali waa ka waantoobin inay qabyaalad wax ku qaybsato”
Nabigu (SCW) wuxuu ka taga qabyaalada waa qurune.
Faafin: SomaliTalk.com | Sept 22, 2003